नेपाल आउने पर्यटकमध्ये १७ प्रतिशत अन्नपूर्ण पदयात्रामा | गृहपृष्ठ
Home रोजगारी नेपाल आउने पर्यटकमध्ये १७ प्रतिशत अन्नपूर्ण पदयात्रामा
on: १४ पुष २०६९, शनिबार ००:०० रोजगारी
नेपाल आउने पर्यटकमध्ये १७ प्रतिशत अन्नपूर्ण पदयात्रामा
पुस ७, काठमाडौं (अस) । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकमध्ये १७ प्रतिशतले अन्नपूर्ण क्षेत्रको पदयात्रा गरेका छन् । सन् २०१२ को डिसेम्बरसम्ममा सो क्षेत्रको भ्रमण गर्ने पर्यटक सङ्ख्या १ लाख नाघेको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र प्रवेश शुल्क शाखा प्रमुख राजेन्द्र जोशीले सन् २०१२ को डिसेम्बर तेस्रो सातासम्ममा अनुमति लिएर त्यस क्षेत्रमा जाने पर्यटक १ लाख ३ सय पुगेको जानकारी दिए । यो सङ्ख्या नेपाल आएका कुल हवाई पर्यटकमध्ये १७ प्रतिशतभन्दा बढी हो । पदयात्री पर्यटकमार्फत रू. १७ करोड ८२ लाख राजस्व सङ्कलन भएको जोशीले जानकारी दिए । यसमा पोखराबाट डिसेम्बरमा गएका पर्यटकको तथ्याङ्क समावेश छैन ।
सन् २०१२ मा नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्या करीब ६ लाख पुग्ने र सोको तुलनामा अन्नपूर्ण जानेको सङ्ख्या १७ प्रतिशतभन्दा बढी हुने देखिएको छ । सन् २०१२ को ११ महीनामा हवाई मार्गबाट कुल ५ लाख ५३ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । गतवर्ष सन् २०११ को डिसेम्बरमा मात्रै आएका ४३ हजार सङ्ख्याको अनुपातमा यस वर्षको सोही महीना पर्यटक थपिएमा १७ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ ।
अन्नपूर्ण संरक्षण नेपालकै आकर्षक र सबैभन्दा ठूलो संरक्षित क्षेत्र रहेको र पर्यटकको समेत रुचिको गन्तव्य बनेको छ । पूर्वाधार विकासको गति बढ्दा पनि यस क्षेत्रमा वर्षेनि पर्यटक जाने गरेको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । अन्नपूर्ण पदयात्रा अन्य पर्यटकीय गन्तव्यको तुलनामा सहज, उपयुक्त मौसम, सवारीसाधनको पहुँच पुगेको, सस्तो गन्तव्य भएकाले पनि यसप्रतिको पर्यटकको आकर्षण बढेको ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान)का महासचिव मोहन लम्सालले बताए ।
‘अन्नपूर्ण पदयात्रामा तीन दशक अघिदेखि नै प्रचारप्रसार गर्न थालिएको र विदेशीले पनि उत्कृष्टको सूचीमा राखेको छ,’ लम्सालले भने, ‘यस क्षेत्रभित्र प्रशस्त मात्रामा पदयात्रा मार्ग रहेकाले पनि पर्यटकले आप्mनो रोजाइअनुसारको ट्रेकिङ गर्न पाउँछन् ।’ यस संरक्षित क्षेत्रको प्रवेशपछि पर्यटकले उपल्लो मुस्ताङ, अन्नपूर्ण सर्किट ट्रेक, अन्नपूर्ण सेक्युरिटी ट्रेक, घान्द्रुक घोरेपानी सर्किट ट्रेक, घलेखर्क सर्किट ट्रेक राउण्ड मनास्लु, घाद्रुक, घम्पुस, जोमसोम, नारफूलगायतका दर्जनौं पदयात्रा मार्गमा जान सकिने लम्सालले जानकारी दिए ।
अन्नपूर्ण क्षेत्रको पदयात्रामा जाने विदेशी पर्यटकले संरक्षण शुल्कबापत रू. २ हजार र सार्क मुलुकका पर्यटकका लागि रू. २ सय शुल्क तोकिएको छ । त्यस क्षेत्रमा जाने पर्यटक गतवर्षको तुलनामा ५ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्कमा छ । अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्र घोषणा भएपछि १ लाख पर्यटक पुग्नुले व्यावसायिक उत्साह बढाएको लम्सालको भनाइ छ ।